Shina hanao ny famindrana angon-drakitra ivelan'ny firenena ho resaka fiarovam-pirenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Shina hanao ny famindrana angon-drakitra ivelan'ny firenena ho resaka fiarovam-pirenena
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny famerenana ny fiarovana anatiny dia tokony handalo ny habetsaky, ny isan-karazany, ny karazany ary ny tsiambaratelon'ny angon-drakitra omena any ampitan-dranomasina ary manombana ny loza mety hitranga amin'ny tombotsoan'ny fanjakana sy ny tombontsoam-bahoaka ary ny zo ara-dalàna sy ny tombontsoan'ny tsirairay sy ny fikambanana.
Ireo sampan-draharaha te-hanome angon-drakitra any ivelany dia iharan'ny famerenan'ny governemanta Shinoa.
Raha azo ampitaina soa aman-tsara tsy misy fahasimbana sy leakage ny angon-drakitra.
Navoaka ny volavolan-dalàna mba hitakiana ny hevitry ny besinimaro, hoy ny fanambaran'ny Cyberspace Administration of China (CAC).
The Fitantanana ny habakabaka an'i Shina (CAC) namoaka volavolan-dalàna androany, nanambara fa ny sampan-draharaha rehetra te-hanome angon-drakitra any ivelany dia mety handalo fitsirihana fiarovana anatiny ary, amin'ny fotoana sasany, dia iharan'ny fitsirihana ataon'ny governemanta.
Navoaka ny volavolan-dalàna hitakiana ny hevitry ny besinimaro, hoy ny fanambaran’ny CAC.
Ny famerenana ny fiarovana anatiny dia tokony handalo ny habetsaky, ny isan-karazany, ny karazany ary ny tsiambaratelon'ny angon-drakitra omena any ampitan-dranomasina ary manombana ny loza mety ateraky ny hetsika toy izany amin'ny tombontsoam-panjakana sy ny tombontsoam-bahoaka ary ny zo ara-dalàna sy ny tombontsoan'ny tsirairay sy ny fikambanana, hoy ny antontan-taratasy.
Tokony hojerena ihany koa na hampitaina soa aman-tsara tsy misy fahasimbana sy fivoahana ny angon-drakitra, hoy ihany izy.
Raha angonina avy amin'ny tetikasa fotodrafitrasa IT lehibe ao Shina na ny mpanangona dia miasa banky angon-drakitra misy ny mombamomba ny olona 1 tapitrisa na mihoatra, ny famerenana ny fiarovana dia tokony halefa any amin'ny CAC.
Nilaza ilay antontan-taratasy fa ny CAC dia handalo ihany koa ny fanaraha-maso fiarovana amin'ny fizarana ny mombamomba ny olona 100,000 na mihoatra any ivelany.